Guddoomiye Mursal Oo Booqday Dhaawacyada Bukaanno Laga Keenay Baydhabo – Kalfadhi
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ayaa sheegay in ay dowladdu dibadda u qaadi doonto dadka ku dhaawacmay qaraxyadii Baydhabo ka dhacay 13-kii bishaan ee la caddeeyo inaan dalka waxba looga qaban karin. Ballanqaadkan ayuu guddoomiyuhu maanta ka sheegay Isbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho, oo uu dhaawacyadaas qaarkood ku booqday. ” Waxaan rajeeneynaa inta caafimaadkooda halkaan wax looga qaban waayana Iinshaa Allaahu Tacaala inaan meel labaad geyn doono, si caafimaadkooda loo dhameystiro” ayuu yiri guddoomiye Mursal.
Sidoo kale, waxa uu guddoomiyaha Golaha Shacabku kormeeray guud ahaan isbitaalka gaar ahaan qeybta dhaawacyada oo uu si fiican u eegay bukaannada jiifa iyo waxyeelooyinka ay qabaan, sida lagu daabacay warbaahinta qaran. Guddoomiyuhu waxa uu maamulka, shaqaalaha iyo dhaqaatiirta isbitaalka la wadaagay sida uu ugu qancay shaqada ay u hayaan bukaannada. ” Dhaqaatiirtu waxay noo sheegeen in wixii juhdi ah ay ku bixiyeen dhaawacyada, haddii ay noqon lahayd kuwa lafaha jajaban iyo haddii ay noqon lahayd kuwa madaxyada ka qaba dhaawacyada” ayuu yiri Mursal.
Xildhibaanno ka tirsal Golaha Shacabka ayaa Maxamed Mursal Sh. Cabdiraxmaan ku wehliyey booqashadiisa Isbitaalka Digfeer uu ku gaaray maanta.
Wuxuuna sheegay in ay dowladdu ka war hayso sida hagar la’aanta ah ee ay dhaqaatiirta ka shaqeeya Isbitaalka Digfeer, gaar ahaan kuwa Turkida ah ugu diyaarsan yihiin ulana tacaalaan dadka kusoo waxyeelooba qaraxyada ka dhaca dalka.
Aragti: Isbar-bardhigga Go’aannadii Soomaaliya Iyo Suudaan Ee Dilkii Wariye Khaashoqji